Coronavirus to Drive European Airline Industry Shakeout | Myanmar Business Today
Home Business International Coronavirus to Drive European Airline Industry Shakeout
People wearing protective masks walk in Malpensa airport near Milan, Italy, March 9, 2020.
The coronavirus will accelerateaDarwinian shakeout in Europe’s overcrowded airline industry that ultimately benefits Ryanair and British Airways owner IAG, industry experts predict.
Nobody is exempt from the short-term pain that has already seen Flybe collapse and Norwegian Air stock lose about 70 percent of its value inamonth, with no end to the crisis in sight.
Whereas four airlines now control 80 percent of the U.S. market, Europe remains fragmented, with governments, unions and bilateral agreements impeding tie-ups. Consolidation happens when airlines grab routes and traffic from bankrupt rivals.
“This virus will expedite the thesis of consolidation, possibly to extreme levels,” Citi analyst Mark Manduca said, adding that 35 percent of Europe’s short-haul market was loss-making in 2019.
The virus’s spread is hitting more routes – promptinga50 percent Lufthansa capacity cut and similar moves by others – while the full traffic impact is yet to show up in published data.
International bookings to Europe plunged 79 percent as the outbreak mushroomed in Italy, leaving no doubt that the slump will be worse than the 2003 SARS epidemic. It may wipe $113 billion off airlines’ revenues, according to IATA, their global association.
Ryanair’s growth has been hampered by the grounding of Boeing’s 737 MAX aircraft – it has 135 on order – and sold-out production of the Airbus A321neo it is eyeing for Austrian subsidiary Laudamotion.
Alitalia, which has received 1.3 billion euros ($1.5 billion) in state loans since filing for bankruptcy in 2017, suspended most of its Milan operations on March 8 as the government locked down large areas of northern Italy. The company did not address questions about its liquidity situation.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လေကြောင်းလိုင်းများ များပြားသော ဥရောပ၏ လေကြောင်းကဏ္ဍကတွင် Darwinian shakeout ဟု ခေါ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ ပေါ်ပေါက်စေကာ Ryanair နှင့် British Airways ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် IAG အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
Fybe ကို ပြိုလဲစေပြီး Norwegian Air ၏ စတော့ဈေးများကို တစ်လအတွင်း၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ထိုးကျစေခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ရောဂါပိုးကူးစက်မှုပြဿနာက ပျောက်ကွယ်သွားမည့် အလားအလာမရှိသေးရာ ထိုပြဿနာ၏ ထိခိုက်မှုမှ ကင်းလွတ်သော လုပ်ငန်းဟူ၍ မရှိနိုင်ပေ။
သို့သော် ဖိအားများ၊ ပြဿနာများလွန်းခြင်းကလည်း ‌ရောဂါပိုးကူးစက်မှုပပျောက်သွားသည့်အခါ၊ ခရီးသည်များ အနေဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် လည်ပတ်သောအခါတွင် အဓိက လုပ်ငန်းကြီးများ၏ အင်အားကို အားကောင်းလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
“လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေမှာ ကျဆုံးမှုတွေကို တွေ့ရမှာကတော့ မလွဲမသွေပါပဲ” ဟု Ryanair အကြီးအကဲ Michael O’Leary က ပြောသည်။
ရက်ပိုင်းအတွင်းတွင်ပင် ဗြိတိသျှ ဒေသတွင်းလေကြောင်းလိုင်းများမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှုကြောင့် ရုတ်တရက် ငွေကြေးဆုံးရှုံးရသည်ဟုဆိုကာ ပျံသန်းပြေးဆွဲမှုများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ Norwegian ဆိုလျှင် ၂၀၂၀ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
O’Leary’s ၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ Norwegian အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် နှစ်နှစ်အတွင်း သုံးကြိမ်မြှောက် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များထံမှ ငွေထည့်ဝင်မှုရယူခဲ့သည့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှာ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနေသကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ်နည်းပါးသော လေယာဥ်ခရီးစဥ်များကိုလည်း လျှော့ချခဲ့သည်။ ယင်းအပြင်း ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်း ထုတ်ရောင်းခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဈေးကွက်တွင်တော့ ဈေးကွက်ဝေစု၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လေကြောင်းလိုင်းကြီး လေးခုက ကြီးစိုး‌ထားသော်လည်း ဥရောပဈေးကွက်ကတော့ လေးကြောင်းလိုင်းများစွာရှိနေသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ပူးပေါင်းသည်ဆိုသည်မှာလည်း ပြိုင်ဘက်များ ဒေဝါလီခံသွားသည့်အခါတွင် ခရီးစဥ်များနှင့် ခရီးသည်များကို ရယူခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်တတ်သည်။
Flybe၏ ဆုံးရှုံးမှုက Ryanair ၊ easyJet တို့နှင့် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်နေသည့် ခရီးစဥ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးနှုန်းဆိုင်ရာ ယှဥ်ပြိုင်မှုကို လျော့ကျစေသည်။ ထို့အတူ Nowegian ထွက်သွားခြင်းကလည်း ပြိုင်ဘက်များ၏ ဈေးနှုန်းနှင့် ပျံသန်းပြေးဆွဲမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ ကူးစက်မှုမှာ လေယာဥ်ခရီးစဥ်တော်တော်များများတွင် ကူးစက်နေပြီးဖြစ်ကာ Lufthansa ဆိုလျှင် ၎င်း၏ ပျံသန်းပြေးစွဲနိုင်မှု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချဖြတ်တောက်ပြိး အခြားလုပ်ငန်းများကလည်း ထိုကဲ့သို့ လိုက်လံဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကိုတော့ ထုတ်ပြန်ရခြင်းမရှိသေးပေ။
SOURCELaurence Frost (Reuters)
Previous articleJapan’s Economy Shrinks Faster Than Estimated
Next articleYSX to Increase Stock Trade Matching Times to 7